रोचक शास्त्र अनुसार यि राशिका व्यक्तिले निकै धन कमाउँछन: कतै तपाइको राशी पो पर्‍यो कि ?
शास्त्र अनुसार यि राशिका व्यक्तिले निकै धन कमाउँछन: कतै तपाइको राशी पो पर्‍यो कि ? मानिस आफ्नो राशि पढेर आफ्नो जीवनमा हुने घटनाका बारेमा पूर्वाअनुमान लगाउने गर्दछन्। जसको भाग्यमा राजयोग लेखेको हुने गर्दछ। अर्थात यी व्यक्ति राजाको जस्तो सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने गरी जन्म लिएका हुन्छन्।
धनु राशिः धनु राशिका व्यक्ति निकै भाग्यमानी हुने गर्दछन्। यस्ता राशिका व्यक्तिमा पैसा कमाउने इच्छा निकै तिब्र हुने गर्दछ। यिनीहरु बाल्यकालदेखिनै धनी हुने गर्दछ।
वृष राशिः वृष राशि हुने व्यक्ति धेरै जसो भौतिक सुख प्राप्त गर्नेका शौखिन हुने गर्दछन्। यस्ता राशिका व्यक्ति पुरै जीवन ऐशो आरामसँग बिताउन मन पराउने गर्दछन्। यस्ता व्यक्ति धन कमाउने तिब्र चाहना राख्ने र भविष्यमा राजयोग प्राप्त गर्ने खाले हुने गर्दछन्।
वृश्चिक राशिः वृश्चिक राशिका व्यक्तिलाई सधै भाग्यले साथ दिने गर्दछ। यस राशिका व्यक्ति जीवनमा भौतिक वस्तु प्रति लगाव राख्ने र साथसाथ घर, सम्पत्ति, गाडी किन्नेको शोक हुने गर्दछ। यिनीहरु सधै धनलाभको चाहना राख्ने गर्दछन्।
कर्कट राशिः कर्कट राशिका व्यक्ति सधै आफ्नो परिवारलाई सुखी राख्ने प्रयासमा लाग्ने गर्दछन्। साथै यी राशिका व्यक्ति सधै मेहनत र लगनशीलका साथ काम गरेर पैसा कमाउने चाहना राख्ने हुन्छन्। यस राशिका व्यक्तिमा राजयोग हुने गर्दछ ।
सिंह राशिः सिंह राशि हुने व्यक्ति निकै शौखिन प्रवृतिका हुने गर्दछन्। यिनीहरुको शोक निकै ठूलो ठूलो हुने गर्दछ। यस राशिका व्यक्तिमा राजयोग हुने गर्दछ।